बिज्ञान प्रबिधि – Page3– shubhabihani
Home / बिज्ञान प्रबिधि (page 3)
विमानमा यात्रा गर्दा कुरा केही यस्ता कुरा हुन्छन् जो पाइलट यात्रुलाई कहिल्यै बताउँदैनन्। जब तपाई विमानमा सवार हुनुहुन्छ, पाइलट तथा फ्लाइट अटेन्डेन्ट केही जानकारी दिने गर्छन्, तर सोझै सबै कुरा भने बताउँदैनन्। यसको एक कारण हो, यात्रुको बिच डर नफैलियोस् र गलत कदम नचालुन्। विमानमा सवार हुँदा पाइलटले यात्रुसंग लुकाउने केही कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
एजेन्सी: नासाले पठाएको जुनो भूउपग्रह सबैभन्दा ठूलो गृह वृहस्पतिमा प्रवेश गरेको छ। पाँच वर्षको अथकप्रयासपछि सौर्य परिवारमा रहेको ठूलो ग्रहमा जुनो भूउपग्रहरले सफलतापूर्वक प्रवेश पाएको नासाले जनाएको छ।
काठमाडौं: माइक्रोम्याक्सले युनाइट सिरिजको दुई नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। उसले युनाइट ४ र युनाइट ४ प्रो सार्वजनिक गरेको हो।
असार १०, २०७३- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ भर्ना हुन तोकेको मापदण्ड– विपरीत विद्यार्थी भर्ना गरिए रजिस्ट्रेसनमा समस्या आउने जनाएको छ ।
फोन नआउँदा पनि घण्टि बजेजस्तो, भाइब्रेसन आएजस्तो महशुस हुन्छ?
कहिलेकाहिँ तपाईँलाई खल्तीमा राखेको मोबाइ
लबाट भाइब्रेसन आएको अनि घण्टि बजेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर जब मोबाइल झिकेर हेर्नुहुन्छ, कुनै फोन अथवा मेसेज आएको हुँदैन, यस्तो किन हुन्छ?
चिन्ता नलिनुहोस्- तपाईँ पागल हुनुभएको छैन। केहि नहुँदा पनि मोबाइल भाइब्रेट गरेको जस्तो लाग्नु वास्तवमा स्वाभाविक कुरा हो।
हालै भएको एक खोजबाट करीब ८९ प्रतिशत मानिसहरूले १ हप्तामा कम्तीमा १ पटक आफ्नो मोबाइलबाट यस्तो “दैवी भाइब्रेसन’ सुन्ने गरेको पाइएको छ
“हामी सँधै यस्ता भाइब्रेसन र सिग्नल सुन्न आतूर हुन्छौँ, जसले मेसेज अथवा फोन आएको सूचीत गराउँदछ।”, प्रमुख अनुसन्धानकर्ता मिसेल ड्रुइन भन्छिन्- “यदि कुनै महत्वपूर्ण कामको लागि तपाईँले कसैको सन्देशको आश गरिराख्नुभएको छ भने, त्यस्तो सिग्नल सुन्ने गरिन्छ।”
कसैको सन्देशको प्रतिक्षा गर्दा अनि कामकाजको थकान र तनावले गर्दा हामीले आफ्नो मोबाइलबाट यस्तो आवाज आएको कल्पना गर्ने उनले बताइन्।
यस्ता झुटा नोटिफिकेशनबाट हैरान हुनुहुन्छ भने, मिसेल भन्छिन्- “हरेक दिन केहि घण्टा तपाईँ आफ्नो फोनबाट टाढै बस्नुहोस् अथवा स्वीच अफ गरेर राख्नुहोस्, केहि दिनमा फरक पाउनुहुनेछ।”
‘यसको प्रमुख कारण आईफोनको व्यापार घट्नु हो’ कम्पनीले भनेको छ। उसले सन २०१६ को दोस्रो त्रैमासमा ५० करोड ५६ (५०.५६ बिलियन डलर) लाख डलरको व्यापार गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८ करोड कम हो। सन २००३ बाट व्यापार सुरुवातदेखि निरन्तर व्यापारमा छलाङ मार्दै आएको कम्पनीले पहिलो पटक यसरी व्यापार गुमाएको हो।
आईफोनले २०१६ मा मात्र कम्पनीकै सबैभन्दा सस्तो फोनका रूपमा ‘५ एसई’ ल्याएको छ। भारत लागायत तेस्रो विश्वका ठूला बजारका लागि ल्याइएको यो आईफोनले व्यापारमा केही मद्दत गर्नसक्ने आकलन गरिएको छ।
आईफोनले गुमाएको बजारको विषयलाई लिएर माइक्रोसफ्टाका पूर्वसीईओ स्टेभेन बलमेरले ‘आईफोनमा राम्रो इमेल सिस्टम नभएकाले मानिस बिस्तारै ब्याकबेरीतर्फ मोडिन सक्ने संकेत गरेका छन्। तर आईफोनले आगामी दिनमा बजारमा ल्याउन तयार गरिरहेको आईफोन ७ बिना हेडफोन ज्याक आउने आँकालन गरिएको छ।
चीनबाट आउँदै तीब्र गतिको इन्टरनेट, भारतको एकाधिकार तोडियो
नेपाल–चीनबीच जोडियो अप्टिकल फाइबर
काठमाडौं: दुरसञ्चार प्रविधिबाट भारतसँगको मात्रै परनिर्भरता अब तोडिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले रसुवागढीस्थित नाकामा चाइना टेलिकम्युनिकेशन कर्पोरेशनसँग अप्टिकल फाइबर जोड्न सफल भएपछि भारतको विश्वजगतसँग दुरसञ्चारबाट जोडिन भारतसँगमात्रै निर्भर नेपालको विकल्प खुल्ला भएको हो ।
काठमाडौंबाट बिच्छ्याइएको अप्टिकल फाइबरलाई रसुवागढी नाकाबाट चाइना टेलिकम्युनिकेशनसँग जोड्न सफल भएपछि अब नेपालले चीनबाट तीब्रगतिको इन्टरनेट ल्याउन सक्ने भएको हो ।
यसले नेपाल र चीनबीचको साझेदारी र सम्बन्ध त मजबुत हुने नै छ अर्कातिर नेपाली उपभोक्ताले तीब्रगतिको इन्टरनेट र डाटा सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
‘हामीले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन नाकामा दुई देशबीच तीन दिनअघि अप्टिकल फाइबर कनेक्ट गर्न सफल भएका छौं’, नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन्, ‘अप्टिकल फाइबर कनेक्ट भएपछि अब हामीले चीनबाट व्यवसायिकरुपमा तीब्र गतिको इन्टरनेट ल्याउन सक्नेछौं । यो अप्टिकल फाइबर काठमाडौंबाट, धादिङको गल्छी हुँदै रसुवाको धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म पुर्याए जोड्न सफल भएका छौं ।’
रसुवागढी नाकाबाट नेपाल टेलिकम र चिनियाँ सरकारको स्वामित्यवमा रहेको चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसन एकापसमा जोडिनुअघि नै दुबै मुलुका प्राविधिकले फाइबरको सफल परीक्षण गरेका थिए ।
परीक्षणका क्रममा दुबै कम्पनीका प्राविधिकरु रसुवागढी नाकाबाट काठमाडौं र चीनको राजधानी बेइजिङतर्फ ब्यान्डविथ आदानप्रदान गर्न सफल भएपछि दुई देश फाइबरबाट औपचारिकरुपमा कनेक्ट भएका हुन् ।
‘हामीले यसअघिबाटै दुई देशबीच फाइबर कनेक्ट स्थापित गर्न आवश्यक प्राविधिक सामान दुबै नाका र राजधानीमा तयार गरिसकेका छौं’, वैद्यले भनिन्, ‘नेपाल टेलिकमले यसै महिनाभित्र नेपाल–चीन र भारतबीच सिधै डाटा आदानप्रदान गर्ने पूर्वाधार तयार गरिसक्नेछ ।’
भारतको बाटो हुँदै सिंगापुरको डाटा सेन्टरमार्फत जोडिएको नेपाल अब हङकङको डाटा सेन्टरसँग जोडिनुको अर्थ भनेको गुगलदेखि अन्य इन्टरनेट सेयरिङसँग सीधा जोडिनु हो ।
चीनसँग जोडिनका लागि नेपाल टेलिकमले धादिङको गल्छीबाट करिब ९० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएको छ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार रसुवागढी नाका २०७२ वैशाखको भूकम्पले धेरै क्षति भएकाले त्यहाँ रहेको पूर्वाधार टिमुरेमा सार्न केही समय लाग्नेछ । रसुवागढीमा अझै पनि पहिरो खस्ने सम्भावना भएकाले त्यहाँको पूर्वाधारलाई टिमुरेमा सारिसकेपछि जुलाईबाटै टेलिकमले चीनसँग इन्टरनेटको व्यवसायिक कारोबार थाल्ने भएको छ ।
इन्टरनेट विस्तारमा चीनले सघाउने सबै विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्‍याइने
जेष्ठ १७, २०७३- मुलुकका सबै सामुदायिक विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने सरकारी योजनालाई चीनले सहयोग गर्ने भएको छ । उसले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउदै सरकारसँग विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको हो ।
‘चीनले सबै विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनामा चासो देखाएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘हामीसँग प्रस्ताव मागिसक्यो ।’ उनका अनुसार, चीनियाँ दूतावासका अधिकारीको एक टोलीले सञ्चार मन्त्रालयमा आएरै सरकारी योजनामा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले औपचारिक माध्यमबाट प्रस्ताव पठाए आफुहरु योजनाका लागि भौतिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि सामुदायिक विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि माइक्रो वेभ ट्रान्समिसनबाट सेवा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
चिनियाँले चासो देखाएपछि मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत औपचारिक प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । ‘हामीले प्रस्ताव बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणबाट आएपछि परराष्ट्रमार्फत पठाउछौ ।’ सञ्चारले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रस्तावलाई पूर्णता दिने उनले बताए । ‘इन्टरनेट सेवा विस्तार हाम्रो क्षेत्रमा भएपनि यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले दुवै मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर प्रस्ताव पठाउछौं ।’
चीनले विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट जोड्न लाग्ने उपकरण, कम्प्युटर, सोलार प्यानलगायतका पूर्वाधारलाई आवश्यक वस्तु सहयोग गर्न चासो देखाएको हो । दुई वर्षअघि आएको ब्रोड ब्यान्ड नीति र एक वर्ष अघि आएको सूचना तथा सञ्चार नीतिमा पनि आगामी चार वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक महिनाअघि नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न इच्छुक सामुदायीक विद्यालयसँग आशयपत्र समेत माग गरिकेको छ ।
ब्रोडब्यान्ड नीतिले ‘कनेक्ट अ स्कुल कनेक्ट अ कम्युनिटी’ कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीति लिएको छ । यो नीतिले सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो । यसैगरी सूचना तथा सञ्चार नीतिले भने सामुदायीक विद्यालयमा इन्टरनेट सहित आधारभुत सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा गरि लागू गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी हरेक गाविसमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने योजना पनि नीतिले अघि सारेको छ ।